पिक्चर: फोटोशपबाट सिधा छविहरू डाउनलोड गर्नुहोस् | क्रिएटिव अनलाइन
एडोब फोटोशपको साथ हाम्रा प्रोजेक्टहरूमा काम गर्नको लागि सबैभन्दा उपयुक्त छविहरू फेला पार्न विभिन्न तरिकाहरू छन्। धेरै अवसरहरूमा हामीले तपाईंको लागि छवि बै banks्कहरू र अनलाइन संसाधनहरूको धेरै छनौटहरू उपलब्ध गराएका छौं, यद्यपि हामीले खोजिरहेका सामग्रीहरू प्राप्त गर्न अर्को एउटा चाखलाग्दो विकल्प पनि छ। यो विकल्प प्लगइनहरू वा एड्-अनहरू हुन् जुन हामीले हाम्रो अनुप्रयोगमा सामेल गर्न सक्दछौं। पिक्चुरा हो Adobe Photoshop ईन्टरफेस नगरी वेबमा छवि बैंकहरूको बीचमा डुब्ने उत्तम समाधान। यस उपकरणले हामीलाई सबै प्रकारका छविहरू नि: शुल्क खोज्न मद्दत गर्दछ र पीसी र म्याक दुबैसँग उपयुक्त छ, जे होस्, केवल फोटोशपको नवीनतम संस्करणको लागि: सीसी।
कुनै श doubt्का बिना, यो विशेष गरी हामी मध्ये एक जो अनुप्रयोगको साथ काम दिनको धेरै घण्टा खर्च गर्न को लागी ध्यानमा राख्न एक धेरै चाखलाग्दो उपकरण हो।
यसको अपरेशन एकदम सरल छ। तपाईंले भर्खर प्लग-इन डाउनलोड गरेर फोटोशपमा स्थापना गर्नुपर्नेछ। एकचोटि तपाईले यो अनुप्रयोगमा समावेश गर्नुभयो, हामी छविहरू डाउनलोड गर्न सक्दछौं कुनै पनि अवरोधहरू बिना जुन मैनुअल खोज र डाउनलोडहरूले प्रदान गर्दछ। पिक्चुराको साथ हामी तुरून्त पत्ता लगाउन र फ्लिकरबाट कुनै छवि प्रयोग गर्न सक्छौं। हाम्रो खोजी गरिसकेपछि र हामीले खोजेको छवि फेला पारे पछि, यो केवल क्लिक गर्ने र काम सुरु गर्ने कुरा मात्र हुनेछ।
यसले हामीलाई बिभिन्न विकल्पहरूको साथ फिल्टरि tools उपकरणहरूको प्रयोगमार्फत हाम्रो खोजीलाई परिष्कृत गर्न पनि प्रदान गर्दछ। हामी लाइसेन्स र प्रतिलिपि अधिकार द्वारा छविहरू खोज्न सक्छौं। पिक्चरले सजिलैसँग कुनै पनि फ्लिकर छवि पत्ता लगाउन सक्दछ किनकि यसले फ्लिकर एपीआई प्रयोग गर्दछ। हामी अरू के सोध्न सक्छौं?
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » डिजाइन उपकरणहरू » Photoshop » पिक्चुरा: फोटोशपबाट सिधा छविहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
भयानक धेरै उपयोगी!
एक समय थियो जब व्यक्तिहरू स्रोतको उल्लेख गर्न पर्याप्त दयालु थिए ... :)
यसलाई प्रकाशित नगर्नुहोस्, तर स्वस्थ बानीहरू पछाडि राख्नु हुँदैन ...
क्लासिक थ्रीडी-प्रिन्टेड चित्रकलाहरूले अन्धालाई पहिलो पटक यी प्रख्यात कार्यहरू "हेर्न" अनुमति दिन्छ